Tantaran'ny hotely: Hotely Elephantine Colossus
Home » Vaovao momba ny indostrian'ny fandraisam-bahiny » Tantaran'ny hotely: Hotely Elephantine Colossus
Enga anie 5, 2018
Rehefa niainga avy tao amin'ny toeram-pivarotana sandbar any Brooklyn i Coney Island ka hatrany amin'ny kianja filalaovana amoron-dranomasina lehibe indrindra tamin'ny taona 1880 dia nipoitra ny karazana manintona rehetra. Nisy efitrano labiera, roller coaster, izay nantsoina hoe "freak fampisehoana" ary rafitra goavambe tokana fantatra amin'ny anarana hoe Elephantine Colossus. Izy io dia namboarina tamin'ny 1884 avy amin'i James V. Lafferty (1856-1898) izay nihevitra fa ny dingana lehibe manaraka ny maritrano dia ny famolavolana tranobe miendrika biby, vorona ary koa trondro. Nandritra ny roa ambin'ny folo taona talohan'ny nandoroany azy dia ilay hotely habe jumbo any Brooklyn dia fantatra amin'ny anarana hoe Colossus of Architecture sy ny Elephantine Colossus. Lahatsoratra iray tamin'ny 1924 Brooklyn Eagle no nanome refy ho 175 metatra ny halavany ary 203 metatra ny halavany.
Araka ny lazain'i "Brooklyn… sy ny fomba nahatongavany tamin'izany fomba izany" nataon'i David W. McCullough (1983), 31 ny efitrano fandraisam-bahiny ary vita tamin'ny hazo nisy fefy fanitso. Izy io dia nanana volo lava miforitra ary howdah lehibe.
David McCullough nanoratra,
"Mba hahatongavana any amin'ny toeram-pitsaboana any howdah, ny mpanjifa dia niditra ny tongony aoriana nanisy marika Fidirana ary nanidina tohatra boribory. Ny tongony aoriana hafa - 60 metatra ny manodidina - dia ny fivoahana, ary ny iray amin'ny tongotra anoloana dia fivarotana paraky. Amin'ny alina, ny famirapiratana dia namirapiratra avy tamin'ny maso efatra metatra ny halavany. ”
Folo taona talohan'io dia nanamboatra ilay omby tsy mety ritra tao West Brighton i Lafferty 25 taona. Ity toerana malaza ity dia nanome zava-pisotro, manomboka amin'ny ronono ka hatramin'ny champagne, ho an'ny tenda mpitsidika an'i Coney. Lafferty dia nanandrana ny hevitry ny elefanta taona vitsivitsy teo akaikin'ny Atlantic City niaraka tamin'ny rafitra kely kokoa izay nantsoiny hoe Lucy the Elephant. I Lafferty dia notohanan'ny haren'ny fianakaviany ary notarihin'ny fahitana ho an'ny karazana fampiroboroboana trano sy tany vaovao izay hitaona ny vinavinam-pasika rava izay nanantenany hivarotra teti-dratsy ho an'ny trano fialan-tsasatra.
Ny tanànan'ny Atlantika tamin'izany fotoana izany dia nitombo haingana ka lasa tanàn-dehibe fialantsasatra Victoria nifantoka tamin'ny manodidina ny Lighthouse Absecon, ny mari-toerana izay mariky ny toeram-pialan-tsasatra. Lafferty dia naniry ny hametraka mari-pamantarana mahavariana sy toerana misy azy ho an'ny fivoarany vaovao ao amin'ny "South Atlantic City." Mba hisarihana ny sain'ny besinimaro sy ny gazety dia nifidy izay foto-kevitra manaitra izy teo aloha: trano miendrika biby goavambe. Mba hankasitrahana tanteraka ny zava-bitan'i Lafferty, zava-dehibe ny mahatakatra fa tamin'ny taona 1880, ny hevitra fananganana rafitra miendrika biby dia tsy heno akory na dia ny teknikan'ny teknika sy ny haitao vaovao amin'ny vanim-potoana indostrialy aza dia nahatonga ireo tetik'asa maritrano sarotra toa izany.
Tamin'ny taona 1881 dia nitazona mpanao mari-trano i Lafferty hamolavola trano miendrika elefanta avy any amin'ny tany hafahafa an'ny British Raj nankalazaina tao anatin'ireo gazety manaitaitra an-tsary. Nitazona mpisolovava iray momba ny patanty koa i Lafferty ary nitady izay hisakanana ny olon-kafa rehetra any Etazonia tsy hanangana tranobe miendrika biby raha tsy mandoa vola izy ireo. Ny mpandinika ny birao amerikana Patent dia nahita an'i Lafferty's ho toy ny forona, hevitra vaovao sy manan-danja ara-teknolojia. Tamin'ny taona 1882 dia nomen'izy ireo patanty hanome azy zony manokana hanao, hampiasa na hivarotra trano miendrika biby mandritra ny fito ambin'ny folo taona.
Sary sokitra maro kokoa noho ny fandrafetana, ny fananganana an'i Lucy dia nahitana hazo an-tapitrisany tamin'ny famolavolana tanana mba hamoronana ireo mpanohana entana ho an'ny rafitra 90 taonina miaraka amina vifotsy vita amin'ny vy. Ilay tranobe elefanta mahavariana, izay nahatonga ny fampahalalam-pirenena nantenain'i Lafferty, no voalohany tamin'ireo telo namboariny. Ny lehibe indrindra - rafitra goavambe misy rihana roa ambin'ny folo habe mitovy amin'i Lucy - nantsoina hoe "Elephantine Colossus" dia natsangana teo afovoan'ny zaridainan'i Coney Island, New York. Ny elefanta Lafferty fahatelo, somary kely noho Lucy, dia "ny Fahazavan'i Azia", ​​natsangana ho ivon'ny programa fivarotana tany Lafferty iray hafa any South Cape May. Nirehitra ny Colossus taty aoriana, niharan-doza ny 27 septambra 1896 ary potika ny Fahazavan'i Asia, ary i Lucy sisa no tafavoaka.
Tamin'ny faran'ny taona 1880, na dia nahasarika mpijery olona maro aza ireo tranobe elefanta, dia very vola ny firoboroboan'ny trano be loatra nataon'i Lafferty. I Lucy sy ny fananany ao amin'ny Nosy Absecon dia namidy tamin'i John sy Sophie Gertzer, izay nifandimby nanamboatra ny tranon'ny elefanta ho mpizahatany, hotely kely, trano kely amoron-dranomasina, trano fivarotan-trano ary trano fivarotana. Mandritra izany fotoana izany, ny "South Atlantic City" dia nanjary vondrom-piarahamonina amoron-tsambo nandroso izay nanova ny anarany hoe Margate. Tamin'ny 1920 dia voatery nakatona i Lucy the Elephant tavern tamin'ny alàlan'ny fandalovan'ny Prohibition. Rehefa nofoanana io lalàna io tamin'ny 1933, dia lasa bara indray avy hatrany. Tamin'ny taona 1950, rehefa nisy Amerika vaovao nipoitra tamin'ny Ady Lehibe Faharoa hananganana tranokala lalambe sy hampiasa fiaramanidina ho fomba vaovao mora mankany amin'ny toerana fialan-tsasatra hafahafa, dia nanjavona tsy hitan'ny besinimaro i Lucy ary nivadika ho kivy. Tamin'ny taona 1960 dia efa loza mitatao ho an'ny filaminam-bahoaka efa rovitra izy, nokasaina horavana.
Tamin'ny 1969, teo alohan'ny bolan'ny mpamaky lamba, ny “Komity Save Lucy” natsangan'ny Fikambanan'ny Civic Margate dia nanomboka tolom-bahoaka nandritra ny roapolo taona izay namindra an'i Lucy tany amin'ny tany amoron-dranomasina izay fananan'ny tanàna ary namerina ilay firafitra manokana ho toerana manan-tantara sy toerana manintona ny fizahan-tany . Hatramin'ny taona 1973, vola be no nangonina tamin'ny fanentanana manokana "Save Lucy" hamerenana amin'ny laoniny ny fahamendrehana sy ny ivelan'ny 90-ton pachyderm XNUMX taonina. Saingy mbola mitohy ny ady amin'ny famoriam-bola ankehitriny satria miasa ny vondrona mba hanangona vola fanampiny takiana mba hanoratana ny vidin'ny fikolokoloana sy ny ady amin'ny harafesina, lo ary koa ny tselatra amin'ny bibidia hazo lehibe.
Ny mpanoratra, Stanley Turkel, dia manam-pahefana ekena sy consultant amin'ny indostrian'ny hotely. Izy dia miasa amin'ny hotely fandraisam-bahiny, fandraisam-bahiny ary fakan-kevitra momba ny fitantanana fananana, ny fanaraha-maso ny asa ary ny fahombiazan'ny fifanarahana momba ny trano fandraisam-bahiny sy ny fanendrena azy. Ny mpanjifa dia tompona hotely, mpampiasa vola ary andrana fampindram-bola. Ny bokiny dia misy: Hotely amerikanina lehibe: mpisava lalana ny indostrian'ny hotely (2009), namboarina haharitra: hotely 100 taona an-taonany any New York (2011), namboarina haharitra: trano fandraisam-bahiny 100+ taona atsinanan'i Mississippi (2013 ), Hotel Mavens: Lucius M. Boomer, George C. Boldt and Oscar of the Waldorf (2014), Great American Hoteliers Volume 2: Pioneers of the Hotel Industry (2016), ary ny boky vaovaony farany, Built To Last: 100+ Year -Old Hotels Andrefan'i Mississippi (2017) - azo jerena amin'ny endriny hardback, paperback ary Ebook - izay nanoratan'i Ian Schrager ny sasin-teny: "Ity boky manokana ity dia mamarana ny trilôgrafia tantaran'ny hotely 182 manana fananana klasika misy efitrano 50 na mihoatra… Tsapako fa ny sekoly sekoly fandraisam-bahiny rehetra dia tokony hanana ny setin'ireto boky ireto ary hanome azy ireo famakiana takiana ho an'ny mpianatra sy ny mpiasa ao aminy. ”
Ny bokin'ny mpanoratra rehetra dia azo alahatra amin'i AuthorHouse avy amin'i manindry eto.